Mikea - Wikipedia
Ny Mikea dia vahoaka malagasy monina any anaty ala amin' ny faritra atsimo-andrefana amin' i Madagasikara izay mivelona amin' ny fihinanana zavamaniry sy biby any anaty ala, izay lazaina matetika fa mpihaza sy mpioty. Mipetraka ao amin' ny Ala Mikea izy ireo. Ny ankamaroan' ny Mikea dia avy amin' ny Sakalava, na dia milaza fomba fiaina fa tsy foko ilay teny, ary misy olona avy amin' ny foko malagasy isan-karazany hita ao amin' ny Mikea. Ny tobin' ny fianakavian' ny Mikea dia mifindra avy amin' ny faritra fambolen-katsaka voalohany eo amin' ny sisin' ala amin' ny fotoan' ny orana mankamin' ny ala anatiny misy trandraka sy biby fihaza maro hafa amin' ny fizaràn-taona maina, rehefa lasa miankin-doha be amin' ny fakan-javamaniry fihinana izy ireo mba hahazoan' izy ireo ny rano tadiaviny isan'andro. Mifampiankina amin' ny fiainan ireo Vezo mpanjono mpifanolo-bodirindrina aminy sy ireo Masikoro mpamboly sy mpiandry omby izy ireo, izay ivarotany ny vokatra azony, nohadiny na novoleny tany anaty ala. Maro koa ny Mikea manao asa ikaramana indraindray, toy ny fiandrasana omby na ny fikarakarana ny tanim-barin' ny olona hafa.
Ny ankamaroan' ny Mikea dia monina ap amin' ny Ala Mikea eo anelanelan' i Toliara sy i Morombe
Ny Mikea amin' izao fotoana izao dia tsy ny sisa tamin' ny fiarahamonina Malagasy mpihaza sy mpioty fahiny, fa taranaky ny olona nialokaloka tany anaty ala nanomboka tamin' ny taona 1800 mba handositra ny ady, ny hetra mavesatra ary ny antony hafa mampahory. Ny fomba fiainan' izy ireo dia heverin' ny mponina ambanivohira sy andrenivohitra ho toy ny ntaolo, izay manampy amin' ny zava-miafina momba azy ireo izay nanentana ny fedrà sy angano isan-karazany. Heverina fa izy ireo no Vazimba lazain' ny angano fa mponina tany am-boalohany teto amin' ny Nosy, na dia tsy misy porofo manamarina izany. Tsy mitovy amin' ny Beosy mpihaza any amin' ny tany avo be tendrombohitra izy ireo. Raha olona 1 500 eo ho eo no fantatra amin' ny anarana hoe Mikea, maro amin' ireo Malagasy no tsy mino fa mbola misy izany vahoaka Mikea izany amin' izao fotoana izao.
1 Ny maha izy azy ny foko mikea
3.2 Finoana sy fivavahana
4.1 Dihy sy mozika
8 Boky azo anovozan-kevitra
Ny maha izy azy ny foko mikeaHanova
Mpihaza sy mpioty izay manao fambolena voafetra ny Mikea. Ny hoe Mikea dia anondroana ireo izay miaina io fomba fiaina miafy io fa tsy mifamatotra amin' ny foko manokana. Misy vondron' olona maro antsoina hoe Mikea any amin' ny morontsiraka andrefana sy atsimo-andrefan' i Madagasikara, ary ny ankamaroany dia mipetraka ao amin' ny Ala Mikea sy manodidina ny morontsiraka atsimo-andrefana eo anelanelan' i Morombe sy Toliara, amin' ny velarantany mirefy 2 500 km2. Araka ny tantara dia mety niitatra hatrany atsimo amin' ny onin' i Fiherenana ary hatrany avaratra amin' ny onin' i Mangoky ny vondro-Mikea lehibe; mipetraka any andrefana sy atsimo-andrefan' ny Farihy Ihotry ny vondro-Mikea lehibe iray hafa. Matetika izy ireo dia heverina ho isan' ny foko Sakalava, na dia misy aza ny Mikea izay manao ny fiaviany ho avy amin' ny foko maro hafa. Ny firaiketan' izy ireo amin' ny fomba fiaina heverin' ny mponina ambanivohitra sy andrenivohitra ho ntaolo dia niteraka fedrà sy angano maro samihafa momba azy ireo, ary maro ny Malagasy no mihevitra fa taranaky ny Vazimba, izay mponina tany am-boalohany, izy ireo, na dia tsy misy aza ny porofo manohana izany fomba fijery izany. Ny ankamaroan' ny Malagasy dia mihevitra fa angano ny fisian' ny Mikea ary tsy mahafantatra fa misy Malagasy mbola miaina ny fomba fiaina Mikea mandraka ankehitriny. Ny teny hoe Mikea no tena ampiasain' ny olona avy any ivelany hanondroana ity vondrona ity ary tsy ampiasaina matetika izany ao amin' ireo Mikea. Aleon' ny ankamaroan' ny Mikea miantso ny tenany hoe Vezo-Mikea na Masikoro-Mikea, arakaraka ny firazanany manokana.
Faritra misy ny Ala Mikea eo anelanelan' i Toliara sy i Morombe
Ny Mikea dia tsy ny sisa tavela tamin' ny fiaraha-monina mpihaza sy mpioty voalohany. Na dia mbola tsy mahazo azo antoka aza ny mpikaroka hoe oviana ny Mikea no nonina voalohany tany anaty ala sy nanao ny fomba fiain' ny mpihaza sy mpioty, dia nanapa-kevitra izy ireo fa vao haingana no niorina ho vondrom-piarahamonina ny Mikea. Ny ankamaroan' ny Mikea amin' izao fotoana izao dia heverina fa Masikoro nonina ambanivohitra izay nankany anaty ala mba handosirana ny tafika merina sy sakalava tamin' ny taonjato faha-18 sy faha-19. Ny tahirin-kevitry ny mpanjana-tany frantsay tamin' ny taona 1901 dia mamaritra ny mpihaza sy mpioty amin' ny anarana hoe Mikea izay monina any amin' ny tapany atsimo-andrefan' ny Nosy. Heverina fa nitombo ny isan' izy ireo nandritra ny fikomiana tamin' ny taona 1947 izay nanohitra ny fitondràn' ny mpanjanaka frantsay, rehefa nandao tanàna sy vohitra niafina tany anaty ala manerana ny firenena ny fianakaviana malagasy maro. Ny fitrandrahana solitany tamin' ny taona 1950 sy 1960 dia nitaky lalana namakivaky an' ireo ala mbola tsy voakitika tany atsimo-andrefana, izay nanosika indray ny fifindrà-monin' ny mponina tany an' ala ka hanaraka ny fomba fiaina Mikea.
Ny Mikea dia tokony hiharan' ny lalàna malagasy tahaka ny Malagasy rehetra, nefa raha eo amin' ny fampiharana, dia tsy tongan' ny governemanta sy ny sampan-draharaham-panjakana ny any amin' io mponina io raha mipetraka any anaty ala. Ao anatin' ny fonenana ao amin' ny Ala Mikea dia ny fizankan-tena manome lanja ny fitovian' ny olona tsirairay no manjaka, ka ny lehilahy zokiny indrindra ao amin' ny fianakaviana no manana fahefana lehibe amin' ny fanapahan-kevitra ho an' ny vondrona. Izany dia mifanohitra amin' ny foko sasany, toy ny Merina, izay misy lamim-piarahamonina saro-drafitra nahitana sarangam-pirazanana itsinjarana andraikitra ara-piarahamonina manokana nomena ny vondrom-pianakaviana manokana. Tamin' ny taona 1991 dia notombanana ho 1 500 ny Malagasy niaina ny fomba fiaina mikea, indrindra ny manodidina ny Ala Mikea, izay faritra mahazo rotsak' orana voafetra. Tombanana ho an-jatony maro io isa io tamin' ny taona 1950, izay azo iheverana ny nisian' ny fitomboan' ny mponina. Sarotra ny manombantombana ny tena isan' ny olona mivelona amin' ny fitrandrahana ala, satria ny sokajin' olona tondroina hoe "Mikea" dia tena miovaova, ary ny ambaratongan' ny fiankinan-doha amin' ny fihazana sy ny fiotazana, izay mifanohitra amin' ny fambolena manaraka fizaràn-taona, dia miovaova be amin' ny fotoana rehetra arakaraka ny fahafahana omen' ny toekarena sy ny tontolo iainana. Ny Mikea dia iharan' ny fanilikilihana ara-piarahamonina izay mifandray amin' ny fiheverana azy ireo ho vahoaka ntaolo fiainana sy tsy nandray fivoarana.
Ny trano fonenana sy ny fandaminana ara-tsôsialy eo amin' ny Mikea dia mety miovaova arakaraka ny olona na vondron' olona. Ny Mikea sasany dia mijanona ao anaty ala mandritra ny androm-piainany, fa ny sasany kosa miaina ampahany amin' ny fiainany amin' ny vohitra na an-tanàn-dehibe. Raha miaina any anaty ala ny Mikea, dia matetika mivezivezy isan-taona eo anelanelan' ny toeram-ponenana akaiky indrindra ny zavatra azo ivelomana. Amin' ny vanin-taonan' ny orana dia matetika izy ireo no mipetraka ao anaty vondrona misy olona 30 hatramin' ny 50 eo akaikin' ny ala tsy vaky lay eo akaikin' ny tanimbary vao nodiovina sy nambolena. Ny trano ao amin' izany toeram-ponenana izany dia efa-joro misy tafo avo, toy ny any amin' ny faritra hafa eto Madagasikara, ary amin' ny ankapobeny dia vita amin' ny bozaka sy hodi-kazo. Ireo trano ireo dia mitangorona mahalana, ahitana toera-malalaka eo anelakela-trano. Ny fitobiana amin' ny vanin-taonan' ny orana dia miasa mandritra ny telo ka hatramin' ny dimy taona ka atao fototra amin' ny fitadiavana sakafo ao anaty ala alohan' ny fahataperan' ny loharanon-karena izay mitaky fifindrà-monina any amin' ny toerana vaovao. Ireo miasa amin' ny tanin-katsaka dia mipetraka amin' ny trano ahitra mandritra ny famboleny mandra-pahatongan' ny volana Avrily na Mey, rehefa miverina any amin' ny trano vita amin' ny hodi-kazo. Mandritra ny main-tany manomboka amin' ny volana Mey ka hatramin' ny Oktobra, mizara ho vondrona kely maromaro ny toby izay mifindra any amin' ny aty ala kokoa manakaiky ny toerana maro babò (zavamaniry fihinam-bodiny), izay tsy ahitana afa-tsy trano sy aloka vita amin' ny bozaka sy ahitra, ary misy olona tsy monina amin' izany mihitsy. Saika tsy misy fanaka ao amin' ireo karazana trano fonenana roa ireo ary misy amin' ny Mikea ny matory amin' ny fasika na amin' ny lavaka nohadina eo am-pototry ny votry lehibe.
Miady mafy mba hiantohana ny hatsaran' ny fiainana ilainy ny Mikea. Na dia efa ela aza ny ala no nanome azy ireo ny filana fototra, dia mampihena ny loharanon-karena ny fandripahana ala sy ny fitomboan' ny mponina. Ankoatr' izay dia mikatsaka hatrany ny hahazo zavatra tsara kokoa, toy ny fitafiana, ny Mikea, ka mitaky fandraisana anjara bebe kokoa amin' ny toekarena ivelany izany amin' ny alàlan' ny varotra sy ny karama mba hahazoana vola (ny Ariary). Mampidi-doza ihany koa ny tsy fahampian' ny tolotra ara-tsôsialy toy ny fampianarana sy ny tobim-pahasalamana: noho ny tsy fisiana afa-tsy tobim-pahasalamana tokana ao amin' ny faritry ny Ala Mikea sy ny tsy fahampian' ny rano handroana, dia be loatra ny tahan' ny aretina toy ny raboka, ny habokana ary aretin-koditra.
Ny Mikea dia mazàna mamototra ny firazanany any amin' ny vohitra sasany, ao amin' ny iray na maromaro amin' ireo vondrona telo lehibe, izay mifandray isanisany amin' ny faritra avaratra sy atsimo ary afovoany amin' ny Ala Mikea. Ny ankamaroany koa dia manana havana mipetraka ao amin' ny tanànan' ny Vezo na Masikoro amin' ilay faritra. Fianakaviana Mikea maro no nanangana ziva (fomba fahita matetika any amin' ny faritra atsimo sy atsinana ao Afrika) miaraka amin' ny fokom-pianakaviana Vohitse Vanovato ao amin' ny Masikoro, ka manondro ambaratongam-pihavanana amin' ity fokom-pianakaviana ity izany.
Mazàna ivondronan' ny fianakaviana maro ny tobin' ny Mikea. Anisan' izany ny mpivady zokiolona, ​​ny zanany lahy manambady sy ny vinantovaviny, ny zafikely avy amin' ireo mpivady ireo, ary ny zanak' izy mivady tsy manambady na firy taona na firy taona. Matetika ny zanakavavy efa lehibe dia mifindra any amin' ny tobin' ny fianakavian' ny vadiny aorian' ny fampakaram-bady, fa ny mpivady dia matetika mizara ny fotoanany eo amin' ny tobin' ny ray aman-drenin' ny lahy na ny vavy. Ny fihavanan' ny fianakaviana roa dia miforona amin' ny alalan' ny lanonana anaovana ny fandeo izay anehoana ny lahy amin' ny fianakavian' ny vavy, ary ny faneken' ny ray aman-drenin' ny vavy no maha ara-dalàna ny fanambadiana. Ara-dalàna ny zanaka azo avy amin' ny fanambadiana amin' ny alalan' ny fanolorana' ny lahy fanomezana ho an' ny ray aman-drenin' ny vavy. Mafy orina amin' ny fanambadian' ny Mikea Ny fifandraisana amin' ny anadahin-dreny (renilahy), ary mazàna ny renilahy no manangana zanaka izay ataon' ny vadin' anabaviny ho tsy ara-dalàna. Samy manan-jo hisaraka amin' ny fotoana rehetra sy hanambady indray ny mpivady. Azo atao koa ny fananana vady maro.
Finoana sy fivavahanaHanova
Toy ny Malagasy hafa dia miodina amin' ny fanajana ny razana ny finoana sy ny fivavahan' ny Mikea. Mitovy amin' ny Malagasy hafa koa izy ireo amin' ny finoana ny fisian' ny andriamanitra mpamorona iray antsoina hoe Andrianañahary. Maro amin' ny Mikea no mino ny karazana fanahy monina anaty ala atao hoe koko, izay mifandray amin' ny toerana voajanahary sasany heverina ho masina ao anaty ala; ireo toerana ireo dia ivon' ny lanonana isan-karazany, ka ny toaka amin' izany dia misy heviny ara-panahy sy ara-panoharana. I Ndrianazo, tompon' ny ala, no fanahy lehibe indrindra ao amin' ny zavaboary. Ny fianakaviam-be, izay miparitaka amin' ny toby maro, dia miray hina amin' ny alalan' ny mpisorona atao hoe mpitoka hazomanga, izay miandraikitra ny lanonam-pianakaviana lehibe natokana ho an' ny razana. Fanampin' izany, ao amin' ny toby tsirairay dia misy ombiasy iray fara fahakeliny, izay mampita ny sitrapon' ny razana sy ny fanahy, ary mitana anjara toerana lehibe amin' ny lanonana toy ny fanambadiana, ny famorana, ny tso-drano, ny fombafomba enti-manompo ny razana, ny fandevenana, ary ny tromba sy ny bilo. Ny sasany koa dia manao sikidy sy karazana fanandroana hafa, ary manome torohevitra ara-panahy momba ny andro na toerana tsara indrindra hihazana, hambolena, hifindrana toby, ary zavatra hafa toy izany miseho eo amin' ny fiainana andavanandro.
Ny Mikea dia saika mitovy kolontsaina sy fiteny amin' ny Vezo, foko mpanjono mifanila aminy, sy amin' ny Masikoro, foko mpamboly sy mpiompy isan' ny vondrom-poko sakalava; ny fivelomana nentim-paharazana ihany no manavaka ireo vondrona telo. Ny fampitoviana ny Mikea amin' ny Vazimba razambe dia niteraka ny finoana niely patrana fa manana ny toetran' ny Vazimba ny Mikea, toy ny hakeliray, tsy fitafiana, ny hasaro-kenatra ary ny tsy fifandraisana amin' ny any ivelany, ary ao koa ny fiainana mifanaraka tanteraka amin' ny tontolo voajanahary. Tsy misy porofo manamarina izany anefa.
Ny Mikea dia fantatra fa manamboatra saron-tava - izay tsy fahita firy eto Madagasikara - amin' ny fampiasana nify sy volon' olombelona.
Dihy sy mozikaHanova
Ampahany manan-danja amin' ny fiainana ara-tsôsialy sy ara-panahin' ny Mikea ny mozika. Ny hira manokana dia ampifandraisina amin' ny hetsika sy lanonana isan-karazany eo amin' ny fiainana, anisan' izany ny havoaza (fandevenana), ny bilo (fomba fanasitranana mahagaga), ny tromba, ny ringa (karazana haiady), ny savatsy (famorana) sy ny maro hafa. Ny ankamaroan' ny mozika dia atao amin' ny feon' olombelona - matetika mampiasa sioka, horakoraka ary zavatra hafa amin' ny feo ankoatry ny fihirana - miaraka amin' ny teha-tanana ka hatramin' ny amponga langoro. Ampiasaina koa ny antsiva sy ny jejy lava. Samy tsy fahita firy eto Madagasikara ireo zavamaneno tranainy ireo ary eo anivon' ny Mikea dia ataon' ny lehilahy mifanatrika. Ampiasaina amin' ny fombafomba masina sasany iantsoana ny razana ny zavamaneno tsy fahita firy sy lafo kokoa toy ny marovany sy ny valiha. Ny mpilalao marovany na valiha dia mazàna omena voninahitra ara-bola (fomba) rehefa manatanteraka ny mozikan-danonana. Hira maro no ampiarahina amin' ny dihy sy fombafomba manokana izay mbola fanao eo amin' ny Mikea amin' ny fiainana andavanandro.
Ny Mikea dia miteny fitenim-paritra amin' ny teny malagasy, izay niainga tany atsimon' i Bôrneô. Manakaiky ny fitenin' ny Vezo sy Masikoro ary Sakalava ny fiteniny.
Ny ala misy tsilo maniry amin' ny faritra maina, izay mahazo rotsak' orana latsaky ny 600 mm isan-taona, no tena mamolavola ny asa fiveloman' ny Mikea. Saika ny zava-drehetra ampiasainy dia alainy avy any anaty ala, ary mila adiny roa na latsaka ny Mikea, an-tsalan' isa, mba hanangonana sakafo sahaza mandritra ny andro. Ny vodin-javamaniry fihinana no Ny loharanon-tsakafon' izy ireo, indrindra amin' ny vanim-potoana maina izay mety maha vitsy ny sakafo hafa azo alaina. Miasa mihady amin' ny alalan' ny angady (antsoro) sy ny vilia baolina (kipao) ny olon-dehibe sy ny ankizy na lahy na vavy. Atsatsika na andrahoina alohan' ny hihinanana ny ovy misy tavolo, fa ny babò (na baboho) misy rano kosa dia ialana hetaheta na andrahoana ny sakafo hafa; ny tavolo dia hamainina sy nototoina mba hatao vovo-koba ka amidy eny an-tsena. Manangona voankazo sy voatavo ary tantely any an' ala koa izy ireo, ary ity farany no loharanon-karena lehibe indrindra ho an' ny Mikea mandritra ny vanim-potoanan' ny orana. Mba hahazoana rano mandritra ny vanim-potoanan' ny orana dia maka ranon' orana avy eny an-tampon' ny tranon' izy ireo ny Mikea amin' ny alalan' ny hazo misy loaka na mitondra rano mandeha an-tongotra na sarety tarihin' omby avy any an-tanàna; fa mandritra ny vanimpotoana maina mangatsiaka kosa dia mihinana babò (Dioscorea trichopoda) ny Mikea ary misotro rano avy amin' ny fantsakana voajanahary na nataon' olombelona raha misy.
Ny loharanon-prôteinina fototra dia ny vorona sy ny trandraka. Ny Mikea olon-dehibe sy ankizy na lahy na vavy dia mampiasa kibay hamonoana ny trandraka kely (tambotrika: 0,4 kg), izay misy maro mandritra ny taona, ary ny lehibe kokoa (tandraka: 2-3 kg), izay hazaina indrindra mandritra ny fotoan' ny orana. Amin' ny ankapobeny dia mihaza na mamandrika karazana gidro roa na telo ihany koa izy ireo, saka dia (Felis lybica ocreata), lambo ala indraindray, sokatra sy karazam-biby mpikiky ka mampiasa basy sy lefona ary alika izy ireo, ary mampiasa farango sy fintana mba hakana trondro amin' ny farihin-dranomasira anaty tany. Miompy biby toy ny osy sy akoho ary akanga hohanina na hamidy eny an-tsena ny Mikea sasany. Manome prôteinina fanampiny koa ny voankazo sasany.
Ny katsaka no tena vokarin' ny Mikea, izay nampidirina teto Madagasikara tamin' ny taona 1890. Mamboly mangahazo koa izy ireo indraindray. Ny vanin-taona maina dia ampiasaina hanapahana tanin-katsaka vaovao, izay dorana amin' ny volana Oktobra (fambolena mifindrafindra toerana, antsoina hoe hatsaky) ary ambolena amin' ny Novambra sy Desambra rehefa manomboka milatsaka ny orana. Telo volana aty aoriana no jinjaina io katsaka io ary hohanina mandritra ny vanin-taona misy orana; ny ambin-katsaka dia atapy ho maina sy amidy, ary ny sasany dia tahirizina hambolena sy hohanina amin' ny taona manaraka. Ireo mpivarotra manangona katsaka avy amin' ny Mikea dia manodina azy ho azo aondrana any ivelan' i Madagasikara ka mahazo tombony be.
Ny fiain' ny Mikea dia mifampiankina amin' ny an' ireo mpamboly sy mpiompy masikoro mpifanolo-bodirindrina aminy, sy amin' ny an' ny fianakavian' ny mpanjono vezo. Ny Mikea dia mivelona indrindra amin' ny sakafo alaina ao anaty ala, nefa koa mamboly araka ny fizaràn-taona. Ny fivezivezena sy ny fiankinan' izy ireo amin' ny fanangonam-bokatra mifanohitra amin' ny fitomboan' ny voly dia miovaova araka ny fiovan' ny tsindry ara-tontolo iainana sy ara-toekarena amin' ny fisian' ny loharanon-karena eo amn' ny Mikea ary koa ny an' ny mpifanolo-bodirindrina aminy Vezo sy Masikoro. Mivarotra ny vokatry fihazana sy ny fiotazana avy any an' ala ary ny tsihy voatenona sy ny biby fiompiny ny Mikea, eny amin' ny tsenan' ny Vezo sy Masikoro isan-kerinandro no anaovany izany any amin' ireo tanàna manodidina mba hahazoana ireo zavatra tsy azony alaina ao anaty ala, toy ny fitafiana sy ny fanafody. Mifindra monina mandritra ny fotoana maharitra mba hiasa any amin' ny tanàna manodidina na ny any amn' ny tanànan' i Morombe ny Mikea sasany. Karamain' ny mponina vezo sy masikoro ihany koa izy ireo, amin' ny asa toy ny fanapahana hazo any an' ala ho an' ireo mponina ireo na hiasa tanin-katsaka an' ny Mikea hafa, na ny fiandrasana omby ompian' ny mponina. Indraindray izy ireo dia mahazo omby iray na maromaro ho fanampiny na ho solon-karama, satria famantarana ny fananan-karena ireo ary atao sorona amin' ny lanonana iantsoana ny razana fa tsy atao ho hanina fotsiny. Ny vanim-potoan' ny orana dia fotoana mety handaozan' ny Mikea ny tobiny mba hahazoany manao asa ikaramana any an-tanàna na mba hiotazana katsaka. Amin' io fotoana io ihany koa no mety mifindra any anaty ala hamboly katsaka ny Masikoro sy ny Vezo.
Chantal Blanc-Pamard, "The Mikea Forest Under Threat (southwest Madagascar): How public policy leads to conflicting territories", Field Actions Science Reports, vol. 3,‎ 2009 (DOI 10.5091/plecevo.2011.513, [vakio eto], [tahiry])
Daniel Stiles, "Hunters of the Great Red Island", Geographical,‎ juillet 2007, p. 46–48 (vakio eto [tahiry])
Daniel Stiles, "Madagascar: Music of Mikea Province" [tahiry], Allmusic.com, 2014.
Daniel Stiles, "The Mikea Hunter-Gatherers of Southwest Madagascar: Ecology and Socioeconomics", African Study Monographs, vol. 19, no 3,‎ 1998, p. 127–148 (vakio eto PDF[tahiry]).
Daniel Stiles, "Tubers and Tenrecs: The Mikea of Southwestern Madagascar", Field Actions Science Reports [vakio eto], vol. 30, no 30,‎ 1991, p. 251–263 (JSTOR 3773634)
Hilary Bradt et Daniel Austin, Madagascar : The Bradt Travel Guide, Guilford, CT, The Globe Pequot Press Inc., 2007, 9e éd., 468 p. (ISBN 978-1-84162-197-5 et 1-84162-197-8, vakio eto [tahiry]), p. 113–115
J. Dina et J.M. Hoerner, "Études sur les populations mikea du sud-ouest de Madagascar", Omaly sy anio. Revue des études historiques, nos 3-4,‎ 1976, p. 269-286
Kelly, RL; Rabedimy, JF; Poyer, L (1999). "The Mikea of Madagascar". In Lee, Richard; Daly, Richard (eds.). The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. pp. 215–219. ISBN 978-0-521-57109-8.
Lin Poyer et Robert Kelly, "Mystification of the Mikea: Constructions of Foraging Identity in Southwest Madagascar", Journal of Anthropological Research, vol. 56, no 2,‎ 2000, p. 163–185 (DOI 10.1086/jar.56.2.3631361, JSTOR 3631361)
R.L. Kelly, J.F. Rabedimy et L. Poyer, "The Mikea of Madagascar", in Richard Lee et Richard Daly (éds), The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers, Cambridge, U.K., Cambridge University Press, 1999 (ISBN 978-0-521-57109-8, vakio eto [tahiry]), p. 215–219
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikea&oldid=1043711"
Dernière modification le 9 Febroary 2022, à 08:01